Aqoonkaab Cilladaha lagu dhasho | Aqoonkaab
Cilladaha lagu dhasho
Cilladaha lagu dhasho waa dhibaatooyin dhaca xiliga uu ilmuhu ku korayo ilmo galeenka. Cilladahan waxey noqon kartaa kuwo yar ama kuwo weyn. Waxey saameyn karaan muuqaalka, shaqada xubnaha jidhka koriimada jidhka ama maskaxda. Inta badan cilladaha lagu dhasho waxay soo ifbaxaan saddexda bilood ee ugu horeeya, marka xubnaha uurjiifka ay sameysmayaan, cilladaha qaar waa kuwo aan dhib laheyn halka qaarka kale ay ubaahan yihiin daweyn qaadata waqti dheer. Cillad daran oo lagu dhasho ayaa ah sababta ugu badan ay u dhintaan dhallaanka.
Maxaa sababa cilladaha lagu dhasho?
Cilladaha waxey ka dhalan karaan hiddo, qaab nololeedka, isticmaalidda dawooyinka qaar ama kiimikooyinka, infekshan ku dhaca hooyada xilli ay uur tahay ama intaas oo dhan oo isbaheystay. Hasa yeeshee inta badan si cad looma garan kara waxa sababay iinta.
Waa maxay halista horseedi karto iin?
Dumarka uurka leh waxey halis ugu jiraan iney uurjiifku ay lasoo deristo cillad, halistana waxey kor ugu sii kacdaa marka ay jiraan xaaladahaan soo socda.
Taariikh hore ee cilladaha lagu dhasho ee soo wajahday qoyska
Isticmaalka dawooyinka qaar, cabista khamriga ama cabidda sigaar xiliga uurka
Hooyo da’deedu ay kaweyn tahay 35 sano
Daryeel la’aan dhalmada kahor
Infekshan aan la daweynin sida infekshanda laisugu gudbiyo galmada
Dumarka leh xaaladaha caafimaad sida sonkoroow waxey halis ugu jiraan iney ubadkoodu uu ku dhasho cillad.
Cilladaha lagu dhasho ee caanka an
Waxaa jira 4,000 noocyo cillada ah oo la garanaayo in lagu dhasho. Waxaa loo kala qeybiyaa qaab dhismeed ama qaab shaqo. Cilladaha qaab dhismeedka qaar waxaa ka mid ah.
Dhanxaneg ama bushin dilaacsan
Spina bifida: xangulaha oo qeyb dhabarka banaankiisa ka muuqado
Cilladaha saameya shaqada jirka ee caanka ah waxaa kamid ah
Down syndrome: cillad saameysa caqliga iyo korriimada jirka
Sickle cell disease: cillad ku timaada unugyada guduudan/cascas ee dhiiga
Cystic fibrosis: xanuun dhaawac u geysta sambabaha iyo habka dheefshiidka
Sidee loo daweeyaa cilladaha lagu dhasho?
Dookha daweynta wey ku kala duwan yihiin cilladaha, cilladaha qaar waxaa la sixi karaa wax yar kedib dhalmada halka cilladaha kale ay sameyn joogta ah ku yeelanayaan dhalaanka.
Qaababka loo daweyn karo wa hab dawo, hab qaliin, iyo hab baxnaanin ah.
Sidee looga hortagi karaa cilladaha lagu dhasho?
Cillado badan lagama hortagi karo, laakin waxaa jira wadooyin laqaado oo yareyn kara halista, dumarka raba iney qaadaan uur waxaa wanaagsan iney isticmaalaan qaadashada kaalmaatiga kaba jirka sida folic acid, vitamin k. Sidoo kale waa iney ka feejignaadaan qaadashada dawooyinka qaar oo faragelin ku sameyn kara koriimada uurjiifka.
In jirka lagu ilaaliyo miisaanka caafimaad ah waxey caayineysaa hoos udhigista dhibaatooyinka uurka. Dumarka qaba sonkoroowga waxaa looga bahan yahay iney xil iska saaraan maareynta caafimaadkooda.
Waa muhiim in hooyadu ay booqato isbitaalka si ay u hesho daryeelka dhalmada kahor.
Qore: Cabdilaahi Cabdi Muuse
Previous PostCalool Xanuun Next Post6 Dhibaato Oo Laga Qaado Hurdo Yaraanta